कृपया अनलाइन कक्षा सुचारु गरिदिनुहोस् न – EducationPati – A complete news portal on Education in Nepal
कृपया अनलाइन कक्षा सुचारु गरिदिनुहोस् न
लेखक : एलिस ढकाल
विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस अर्थात् कोभिड – १९ का कारण हरेक मानिसको दैनिक जीवन निकै कष्टकर र कहालीलाग्दो बनेको छ। लामो समयदेखि भएको लकडाउनका कारण हामी सबै घरमा नै कैद भएका छौँ । यस्तो कहालीलाग्दो परिस्थितिका कारण सबै विद्यार्थीहरू भौतिक रूपमा विद्यालयमा उपस्थित भई शिक्षा आर्जन गर्नबाट वञ्चित भएका छन् । सिक्ने र सिकाउने विभिन्न विकल्प हुँदा हुँदै पनि तिनलाई प्रयोगमा ल्याउन सकिएको छैन । प्रयोगमा ल्याइएका माध्यमलाई पनि चौतर्फी रूपमा आलोचनाको वर्षा गराइएको छ, जसले गर्दा मजस्ता तमाम विद्यार्थीहरू शिक्षा प्राप्त गर्ने नैसर्गिक अधिकारबाट वञ्चित भएका छौँ ।
हिजो मात्र सामाजिक सञ्जाल र अनलाइन मिडियाहरूमा एउटा समाचार भाइरल भयो। संस्थागत विद्यालयहरूका छाता संगठन प्याब्सन र एन प्याब्सनले अनलाइन (भर्चुअल) कक्षा बन्द गर्ने! यो समाचारले मेरो मनमा निकै ठूलो चोट पुग्यो। विद्यालयमा गएर सिक्न नपाए पनि हामीले घरबाट नै धेरै कुरा सिकिरहेका थियौँ। नियमित रूपमा अनलाइन कक्षा लिँदा यसै कक्षासँग अभ्यस्त हुँदै गएका थियौँ।
अनलाइनमार्फत घरमा बसी बसी सिकाइ हुन सक्दो रहेछ भन्ने कुरामा हामी विद्यार्थी र अभिभावक ढुक्क हुँदै गएका थियौँ। यस्तो विकराल परिस्थितिमा घरमा नै बसेर उपलब्धिपूर्ण सिकाइ हुन सक्छ भने किन अनलाइन कक्षा सञ्चालन नगर्ने त भन्ने कुरामा अभिभावकहरू पनि निश्चिन्त हुन थाल्नुभएको थियो। एक्कासि गरिएको यस प्रकारको निर्णयले मजस्ता तमाम विद्यार्थीको मनोविज्ञानमा गम्भीर असर परेको छ।
पढ्न र सिक्न पाउनु हरेक विद्यार्थीको नैसर्गिक अधिकार हो। यो संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकार हो। केही संस्थाहरूले मनोमानी रूपमा बन्द गरेको अनलाइन कक्षाका कारण विद्यार्थीको सिकाइ प्रक्रियामा गम्भीर आघात पुगेको छ। सबैको पहुँचमा इन्टरनेटको सुविधा छैन भन्दैमा पहुँच भएकाले अनलाइनका माध्यमबाट सिक्नु के अपराध हो ? सबैको पहुँच छैन भन्दैमा के पहुँच भएकालाई पनि सिकाइबाट वञ्चित गराउनु महानता हो? यी विषयमा हामी सबैले गम्भीर भएर सोच्नुपर्छ र सिकाइ प्रक्रियालाई निरन्तरता दिनुपर्छ।